Sean Williams - latest cricket news, match reports & comment
Zimbabwe won the third and final ODI in the Super Over after the match had ended in a dramatic tie while Pakistan took the series that is a part of the ICC Men’s Cricket World Cup Super League at the Pindi Cricket Stadium, Rawalpindi on a dramatic Tuesday evening.
The International Cricket Council has fined both United Arab Emirates captain Rohan Mustafa and Zimbabwe all-rounder Sean Williams for a breach of Level 1 Conduct following the recently concluded ICC World Cup Qualifiers game between the two teams in Harare.
Wellington Masakadza takes four as Scotland crash out
Wellington Masakadza starred with a four wicket haul while Sean Williams hit a fluent fifty as Zimbabwe sent Scotland out of the tournament by handing them a 11-run defeat in a chase of 148 runs in the fifth match of the first round in Group B in the ICC World Twenty20 in Nagpur.
South Africa Clinch ODI Series With 61-Run Win
South Africa overcame a poor start to the second One-Day International against Zimbabwe in Bulawayo to win by 61 runs and move into an unassailable 2-0 series lead.
Zimbabwe Win Opening ODI
Zimbabwe won the first One-Day International against Afghanistan in Bulawayo by six wickets, chasing down a target of 224 with almost five overs to spare.